नम्रतालाई धक्का ! - मनोरञ्जन - नेपाल
नम्रतालाई धक्का !
गत वर्ष नम्रता श्रेष्ठको हाइहाइ भयो, फिल्म क्लासिकबाट । राष्ट्रियसहित एक दर्जन अवार्डमा एकछत्र राज गरिन् । यही ख्यातिलाई निरन्तरता दिने दाउमा थिइन्, पर्वबाट । किनभने, यस फिल्मलाई क्लासिककै निर्देशक दिनेश राउतले निर्देशन गरेका हुन् । थ्रिलर जनराको यस फिल्मको मुख्य भूमिकामा थिइन् उनी । प्रमोसनमा पनि दिलोज्यान दिएर लागिन् । तर, पर्वले उनको करिअरमा उत्साह ल्याउन सकेन । कारण, १४ जेठमा प्रदर्शित यस फिल्मले न पैसा कमायो, न प्रशंसा । त्यति मात्र होइन, नम्रताकै अभिनय रुचाउने दर्शकको पनि खडेरी लाग्यो । पर्वको कमजोर व्यापारले नम्रताले किन पनि धक्का महसुस गरेकी छन् भने यति बेला उनको हातमा कुनै फिल्म छैन । जबकि, उनीभन्दा पछि आएका प्रियंका कार्की, साम्राज्ञीराज्यलक्ष्मी शाहलाई भ्याइनभ्याइ छ ।